cadnaan kapul – Page 60 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa kula kulmay caasimadda Beijing Wasiirka Arrimaha Dibadda Shiinaha Wang Yi, iyaga oo ka wada hadlay qaabkii lagu horumarin lahaa, laguna xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha. “Shiinaha waxa ay si joogto ah u taageeri doontaa dadaallada Soomaaliya ay ku ilaalsanayso madax banaanideeda, amnigeeda iyo midnimadeeda dhuleed, ...
Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka,Duulista iyo Hawada Soomaaliya ayaa sheegay in Diyaarad aan sharuudaha looga baahan yahay u dhamMeystirneyn ay ka shaqao gali garin Garoonka Diyaaraha Adan cadde ee Magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. Wasiirka ayaa sheegay Si loo hubiyo adeegyada ay u baahan yihin diyaaradaha kasoo dego iyo kuwa ka baxa Garoonka Aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyo badqabka isticmaalka hawada ...
Maxaa Kusoo Kordhay Shacabka Lagu Toogtay Muqdisho Iyo Khasaaraha Ciidanka AMISOM
Warar kii ugu danbeeyay qaraxyo khasaare geystay oo ciidanka Amisom lagula eegtay gudaha degmada Hiliwaa ayaa sheegaya inuu jiro khasaare soo gaaray ciidanka AMISOMee Qaraxa la kulmay. Qaraxyada ayaa la sheegay iney gaarayaan ilaa laba qarax oo lala eegtay kolonyo ciidanka AMISOM katirsan oo marayay suuq ku yaal xaafada Suuqa Xoolaha ee Magaalada Muqdisho. Inta la xaqiijiyay hordha khasaaraha ciidanka ...
DEG DEG: Qarax Xoogan Oo Ka Dhacay Muqdisho Iyo In Ka Badan 5 Ruux Oo Lagu Toogtay
Faaah faahino hor dhac ah ayaa laga helayaa qarax xoogan oo lala eegtay ciidamo katirsan AMISOM oo marayay gudaha degmada hiliwaa ee Magaalada Muqdisho. Goobjooge la hadlay Idaacada Simba ayaa sheegay in kolonyo katirsan AMISOM oo marayay gudaha Suuqa Xoolaha degmada hiliwaa qarax xoogan lala eegtay, qaraxa kadib ayuu goobjoogaha inuu xaqiijiyay in ciidanka AMISOM ay fureen rasaas xoogan oo ...
Deg Deg: Askari Dad Shacab Ah Ku Rasaaseeyay Baladweyne
War goordhaw soo gaaray warqabadka Idaacada Simba ayaa sheegaya in askari katirsan ciidanka maamulka Hirshabeelle uu rasaaseeyay qof shacab ah oo ku sugnaa gudaha Magaalada Baladweyne. Goobjooge la hadlay Idaacada Simba ayaa sheegay in askari katirsan ciidanka maamulka Baladweyne uu rasaas huwiyay nin watay gaari dameer oo ku socdaalayay gudaha magaaladaasi. Ninka watay gaari dameerka ayaa la sheegay inuu marayay ...
Wararkii Ugu Danbeeyay Toogasho Ka Dhacday Magaalada Boosaaso
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya kooxo hubeysan oo magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari ku dilay Nabadoon caan ahaa oo lagu magacaabi jiray Maxamed Saciid Cawaare. Nabadoon Maxamed Saciid Cawaare ayaa la sheegay in kooxdaasi ay ku dileen meel aan sidaa kaga fogeyn hoygiisa oo ku yaaal gudaha magaalo Xeebeedka Boosaaso ee Gobalka Bari. Sarkaal katirsan waaxda danbi baarista ...
Abaal Marin Lagu Bixinayo Cidii Gacanta Ku Soo Dhigta Rag Kufsaday Maamo 85 Jir Ah + Dhageyso
Madaxweyne ku xigeenka maamul Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo la hadlayay warbaahinta ayaa laamaha amniga mamulka waxuu amray iney gacanta kusoo dhigaan ragii ka danbeeyay haweeneey 85 ah oo lagu kufsaday xero barakacayaasha ay ku leeyihiin gudaha Jowhar. Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle ayaa ciidamada daraawiishta maamulkaasi u balan qaaday abaal marino inuu gudoonsii doono cid alaala cidi soo sheegta ...
Wasiirka Difaaca Iyo Taliyaasha Askarta Oo Kormeer Ku Sameeyey Qaar Kamid Ah Xeryaha Ciidanka (Sawirro)
Wasiirka Wasaaradda Difaaca Soomaaliyeed Xasan Cali Maxamed (Amar-dambe) , taliyeyaasha ciidanka qalabka sida, xoghayaha guddiga difaaca golaha shacabka iyo mas’uuliyiin kale ayaa kormeer ku sameeyeen qaar kamid ah xeryaha ciidanka xoogga dalka oo dib u dhis lagu sameyn doono. Sareeyo gaas C/weli Jaamac Gorod Taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa deegaanka Carbiska kula hadlay askar ka tirsan qeybta 12-ka April oo ...
Kalfadhigiii 3-aad Ee Baarlamaanka Soomaaliya Oo Xirmay Iyo Waqtiga Uu Furmayo
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa xildhibaanada Golaha Shacabka ku wargeliyay in kalfadhigii Saddexaad ee Baarlamaanka uu xirmay 10-ka bishan luulyo. Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa xildhibaanada u rajeeyay nasiino wanaagsan, waxaana xildhibaanada ay soo laabanayaan 10-ka September 2018, sida ku cad warqada laso saaray. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa fray Kalfadhigan 3-aad ee ...
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Duhur Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Duhurnimo Arbaco ah Tariikhdana ay ku beegan tahay 11-07-2018.